Akhriso:-Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Aqalka Sare oo ka digay marin habaabin sharciyeed oo la sheegay in ay sameysay Shirkadda Spectrum – Kalfadhi
Akhriso:-Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Aqalka Sare oo ka digay marin habaabin sharciyeed oo la sheegay in ay sameysay Shirkadda Spectrum
in Baarlamaanka, Senator
Senator Abshir Axmed Bukhaari Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa dood sharciyeed dastuuri ah ka keenay qoraal Shirkadda Spectrum ku faafisay bogga ay ku leedahay Interneedka, kaasoo ay uga hadleysay ansixintii Baarlamaanka ee Sharciga Batroolka iyadoo sidoo kale sheegtay in Sharcigaas sugayo saxiixa Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Xildhibaanada Aqalka Sare Senator Abshir Bukhaari ayaa sheegay in Shirkadda Spectrum ay sameysay marin habaabin sharciyeed. Mr Bukhaari ayaa soo bandhigay habraaca dastuuriga ah ee uu marayo meel marinta sharcigaas waxa uuna Shacabka Soomaaliyeed la wadaagay qaladaadka Warbixinta Spectrum.
Qoraal dheer uu soo dhigay bogga uu internet-ka ku leeyahay Senator Abshir Bukhaari ayaa waxa uu ku sheegay in qaladaad badan uu ka muuqdo qoraalka Shirkadda waxa uuna ka digay cawaaqibka ka dhalan kara hadii aysan raali gelin ka bixin qoraalkeeda.
Halkaan ka aqriso qoraalka uu soo saaray Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Aqalka Sare Senator Axmed (Abshir Bukhaari).
HABRAACA DASTUURIGA AH EE XEER DEJINTA JAMHUURIYADA FEDERAALKA SOOMAALIYA
Shirkadda Spectrum Geo waxa ay boggeeda rasmiga ku daabacday 30 May 2019 qormo ka soo horjeeda dastuurka dalka sida aad ka heli karto lifaaqan Qormadaas oo ay cinwaan uga dhigtay Baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ansixiyay Sharciga Batroolka (Somalia’s Parliament Approves Petroleum Law Legislation). Qoraalka waxaa kale oo ay ku sheegtay in Hindise Sharciyeedka Batroolka uu sugayo oo kaliya saxiixa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Haddaba, si loo ogaado marin habowga sharciyeed ee Shirkada Spectrum Geo ay ku faafisay boggeeda waxaan halkan kula wadaagayaa Dadweynaha Soomaaliyeed habraaca dastuuriga ah ee ay tahay in xeer dejinta Dalku ay marto ka hor inta uusan noqon hindise sharciyeed kastaa sharci dhaqangal ah.
Marka hore, awoodda xeer dejinta Dalka waxaa u xilsaaran labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya sida ku cad Qod.55aad ee Dastuurka KMG ah oo dhigaya in Baarlamaanka Federaalka uu ka kooban yahay labo gole oo kala ah:
2. Golaha Aqalka Sare
Madaxa Afaraad (Qod.79aad – Qod.86aad) ee Cutubka Lixaad ee Dastuurka KMG ah wuxuu xeerinayaa dhammaan tallaabooyinka loo baahan yahay in sharci kasta oo qabyo ah uu maro si uu noqdo sharciga dalka.
Nuxurka tallaabooyinkaas waa sida hoos ku qoran:
In sharci kasta oo qabyo ah ee la horkeeno mid ka mid ah labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya uu maro golaha kale ee Baarlamaanka Federaalka iyada oo la raacayo habraaca dastuuriga ah oo si faahfaahsan loogu qeexay Qod.82aad iyo Qod.83aad ee Dastuurka KMG ah.
In nuqulka kama dambeysta ah ee ay meel mariyeen labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya loo gudbiyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si waafaqsan Qod.82aad, Qod.83aad iyo Qod.90aad(f) ee Dastuurka KMG ah; si uu uga dhigo SHARCI dhaqangal ah.
In nuqulka uu ansixiyay Baarlamaanka Federaalka uuna saxiixay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka lagu soo saaro Faafinta Rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si waafaqsan Qod.82aad, Qod.83aad iyo Qod.85aad ee Dastuurka KMG ah.
Sidaas darteed, Sharciga Batroolka ee ay ka hadashay Shirkadda Spectrum Geo waxaa ansixiyay oo kaliya Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka waxaana loo soo gudbin doonaa Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya; si uu uga guto waajibkiisa dastuuriga una dhammeystiro habraaca dastuuriga ah ee kor ku xusan.
Ugu dambeyntii, waxaan u soo jeedinayaa Shirkadda Spectrum Geo in ay dib u saxdo qormada ay ku faafisay boggeeda rasmiga ah, aniga oo ugu baaqaya in ay ilaaliso sharciga Dalka u yaal ayna ka fogaato tallaabooyinka ka hor imaanaya sharciga Dalka. Sidoo kale, waxaan kula talinayaa Shirkadda in ay ka feejignaato qoraallada noocaan ah ee baalmarsan habraaca sharcidejinta Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliyeed.
Xasan Sheekh” Haddii lagu kala tagay Shirkii Garowe waa in la yeeshaa Shirar kale oo aan saan lagu kala tagin”
Xasan Sheekh" Haddii lagu kala tagay Shirkii Garowe waa in la yeeshaa Shirar kale oo aan saan lagu kala tagin"